Jonga ukusebenza kwangaphakathi kweMac yakho nge-iPulse, simahla ixesha elilinganiselweyo | Ndisuka mac
Kusenokwenzeka ukuba abanye kuni sele bonwabele iPasika, ke kusenokwenzeka ukuba nibe nexesha elithe kratya lokhululeka ukuze nibe nakho ukuloba ngezicelo zasimahla okanye zentengiso, esihlala sikubonisa zona kuSoy de Mac. Namhlanje sithetha isicelo esinye eso ivumela ukuba sibone indlela esebenza ngayo iMac, jonga ukuba yintoni ukusebenza kwememori, idiski enzima, indawo yasimahla yediski ... zonke ezinemizobo ebabazekayo esinokuthi siyibeke ethekwini, kwimenyu yebar okanye nakweyiphi ikona yesikrini. ye-Mac yethu, ngokujonga nje ukuba akukho nto itya izibonelelo zeMac yethu, ukuba sinendawo eyaneleyo yokukhuphela uthotho olupheleleyo ...
I-iPulse inexabiso eliqhelekileyo le-9,99 euro, kodwa okwexeshana (asazi de kube iya kufumaneka nini le ntengiso) sinokuzikhuphela simahla. Ngokusebenzisa ujongano lomsebenzisi, iPulse isibonisa ngokusebenza ngaphakathi kwe-Mac yethu kwidesktop, kwindawo esemgceni okanye kwimenyu yebar. Singaqwalasela iiparitha esifuna ukuboniswa kunye nemibala yojongano, enkosi kwimixholo eyahlukeneyo ekhoyo.
I-iPulse isibonisa ukuseta okwakhelwe-ngaphakathi kwe-10, amaxabiso esinokuwatshintsha ngokweemfuno zethu. Kodwa ayisixanduva lokulinganisa ukusebenza kwe-Mac yethu kuphela, kodwa ikwaqinisekisa ukuba ukusetyenziswa kwezixhobo kwanele, into enezicelo ezimbalwa kakhulu ezinokuyenza namhlanje kwi-macOS. I-iPulse ihlala ngaphezulu kwe-4 MB kwisixhobo sethu, ifumaneka kuphela ngesiNgesi kwaye ifuna ubuncinci iMacOS 10.7 kunye neprosesa engama-64. iPress. Okwangoku ikwinguqulelo 3.0.2, uguqulelo ebelukho ukususela nge-22 kaSeptemba kunyaka ophelileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Jonga ukusebenza kwangaphakathi kweMac yakho nge-iPulse, simahla ixesha elilinganiselweyo
UAndres Felipe Rodriguez Garcia sitsho
Ilunge kakhulu yonke le minikelo.
Phendula u-Andres Felipe Rodriguez Garcia
UCristian Rengifo sitsho
Jonga kwi-AppStore kwaye ayikhululekile.
Phendula Cristian Rengifo
I-beta yokuqala kunye nabaqhubi beNvidia bamakhadi kaPascal kwiMac